बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धनबाट बाहिरिने, ओलीसंग रिसाएका बाबुरामले दिए यस्तो कडा चेतवानी « Pana Khabar
बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धनबाट बाहिरिने, ओलीसंग रिसाएका बाबुरामले दिए यस्तो कडा चेतवानी
वाम एकता र तालमेल सम्बन्धी गठबन्धनमा सहभागी बनेको नयाँशक्ति पार्टीले गठबन्धनबाट अलग्गिने चेतावनी दिएको छ । केपी ओली र डा. बाबुराम भट्टराईवीच बुधबार भएको छलफल सकारात्मक हुन नसकेपछि नयाँशक्तिले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
बुधबार बालकोटस्थित केपी ओलीको निवासमा छलफलका लागि पुगेका डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय संसदमा आफ्नो पार्टीले १५ सीट पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै प्रदेशसभामा ३० स्थान पाउनुपर्ने भट्टराईको माग थियो ।
एमाले, माओवादी र नयााशक्ति पार्टीवीच वाम एकताको प्रतिवद्धतासहित चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएपछि डा. भट्टराईले १५ सीट आफूहरुले पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । केन्द्रीय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा गरी १५ सीट नयाँशक्तिले मागे हो ।
वाम गठबन्धनमा सहभागी भएका नयाँशक्ति पार्टी लगायतका दललाई सीट छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेका सीटमा मात्रै एमाले र माओवादीवीच ६०/४० को भागवण्डा गर्ने सहमति भएको नयाँशक्तिका नेताको दाबी छ ।
बालकोटबाट चित्त दुखाएर फर्केका डा. भट्टराईले दिउँसो १२ बजेतिर बबरमहलस्थित आफ्नो कार्यालयमा नयाँशक्ति पार्टीका नेताहरुको बैठक डाकेका थिए । सो बैठकमा उनले नयाँशक्ति पार्टीलाई सम्मानजनक स्थान दिनका लागि एमाले र माओवादीका नेताहरु अन्कनाइरहेको र आफूहरुलाई अपमानित गर्न खोजेको रिपोर्टिंग गरे ।
दशैंका बेलामा तीन दलीय वाम गठबन्धन बनाएका एमाले, माओवादी र नयाँशक्ति पार्टीवीच चुनावी तालमेलका लागि कार्यदलसमेत गठन भएको छ । कार्यदलमा नयाँशक्तिबाट गंगानारायण श्रेष्ठको नाम समावेश भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन ।
शीर्ष नेताहरुवीच पहिले सहमति गरेपछि कार्यदलले काम टुंग्याउने भनिए पनि हालसम्म शीर्षनेताहरुमै तालमेलको सहमति हुने नसकेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
प्रकाशित मिति २०७४ असोज २५ गते बुधबार